Fiombonan' ny Fiangonana Protestanta eto Madagasikara - Wikipedia
Fiombonan' ny Fiangonana Protestanta eto Madagasikara
(tonga teto avy amin'ny Fiombonan'ny Fiangonana Protestanta eto Madagasikara)
Fiombonan' ny Fiangonana Protestanta eto Madagasikara (FFPM), araka io anarany io, dia mampiombona ny Fiangonana Loterana Malagasy (FLM) sy ny Fiangonan' i Jesoa Kristy eto Madagasikara (FJKM). Izany fiombonana izany dia tanterahina amin' ny fiaraha-mivavaka amin' ny fotoana sasany sy fananganana sehatra na fotodrafitrasa iraisana toy ny sekoly. Samy mampiasa ny Baiboly prôtestanta ireo Fiangonana ireo ary iombonany koa ny fampiasana ny boky fihirana sy ny tiona FFPM. Samy manaraka ny ankabeazan' ny teôlôjia prôtestanta izay niteraka sady vokatry ny Reformasiona izy ireo nefa ny FLM manaraka indrindra ny an' i Martin Lotera fa ny FJKM manaraka kokoa ny an' i Jean Calvin. Ireo fiangonana roa ireo no manana tantara tranainy indrindra amin' ny Fiangonana kristiana rehetra eto Madagasikara.
Atao hoe "Fédération des Eglises Protestantes à Madagascar" ny FFPM amin' ny teny frantsay ary "Federation of the Protestante Churchs in Madagascar" amin' ny teny anglisy. Efa tany amin' ny taona 1913 no niforonan' io fiombonana io. Tsy ny fiangonana atao hoe "prôtestanta" (na milaza tena hoe "prôtestanta") rehetra anefa no miombona ao amin' ny FFPM. Ny Eklesia Episkopaly Malagasy (na Aglikana) dia tsy isan' ny FFPM. Tsy ireo ao amin' ny FFPM ireo ihany koa anefa no fiangonana prôtestanta eto Madagasikara.
1 Ireo fiangonana mpiombona
1.1 Ny Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara
1.2 Ny Fiangonana Loterana Malagasy
2 Fanatanterahana ny fiombonana
2.3 Fiombonana miseho amin' ny asa
3 Fifandraisana amin' ny fiangonana hafa
4 Boky sy tranonkala azo anovozan-kevitra
Ireo fiangonana mpiombonaModifier
Roa ny fiangonana miombona ao amin'ny FFPM, dia ny Fiangonana Loterana Malagasy (FLM) sy ny Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara (FJKM).
Ny Fiangonan'i Jesoa Kristy eto MadagasikaraModifier
Ny Fiangonan' i Jesoa Kristy eto Madagasikara dia fiangonana kristiana prôtestanta vokatry ny fitambaran' ny fiangonana telo naorin' ny London Missionary Society (LMS) sy ny Société des Missions Evangeliques de Paris (SMEP) ary ny Frends Foreign Missionary Association (FFMA) tamin' ny taona 18 Aogositra 1968.
Ny Fiangonana Loterana MalagasyModifier
Ny Fiangonana Loterana Malagasy dia fiangonana kristiana prôtestanta eto Madagasikara izay nateraky ny fitambaran' ireo Fikambanana misiônera loterana tamin' ny taona 1950 niasa teto Madagasikara, dia ny Norwegian Missionary Society (NMS) sy ny American Lutheran Church (ALC) ary ny Lutheran Board of Mission (LBM) nanomboka ny taona 1888.
Fanatanterahana ny fiombonanaModifier
Manana ny lalàm-panorenany manokana sy ny fitsipi-piaraha-miasany ny FFPM. Manana birao ahitana filoha iray, filoha mpanampy iray, sekretera jeneraly iray, mpandraharaha iray, mpitahiry vola iray, mpanolotsaina dimy koa izy.
Ho fanehoana sy fanatanterahana izany fiombonana izany dia eken' ny fiangonana ao amin' ny FFPM ny mpandray ny fanasan' ny Tompo avy amin' ny fiangonana hafa miombona ao amin' ny FFPM. Toy izany koa ny amin' ny mpanao raharaham-piangonana. Miray ara-pinoana ireo fiangonana miombona ao amin' ny FFPM amin' ny alalan' ny fanekeny ny Baiboly prôtestanta ho tenin' Andriamanitra, ny sakramentan' ny Batisa sy ny sakramentan' ny Fanasan' ny Tompo, ireo fanekem-pinoana telo (apôstôlika sy nikeana ary atanaziana), ny Vavaka nampianarin' ny Tompo, ary ny fihirana FFPM.
Fiombonana miseho amin' ny asaModifier
Izany fiombonana izany dia miseho ihany koa amin' ny alalan' ny fisahanana "asa iombonana" dia ny "vondron-tsampana" sy ny "vondronasa" ary ny "vondron-tsampanasa".
Ireto avy ny vondron-tsampana hita ao izay mifanandrify amin'ny sampana velona ao amin' ny fiangonana mpikambana: ny Fifohazana Protestanta (na Fifohazana FFPM), ny Farimbonasan' ny Lehilahy Protestanta, ny Farimbonasan' ny Vehivavy Protestanta, ny Farimbonasan' ny Tanora Protestanta, ny Farimbonasan' ny Skoto Protestanta, ny Farimbonasan' ny Sekoly Alahady Protestanta, ny Fiombonan' ny Vokovokomanga Protestanta.
Ireto ny vondronasa izay mahakasika ny lafiny fitaizàm-panahy sy ny sôsialy sy ny toekarena ary ny fanabeazana: ny Vondronasan' ny Fampandrosoana Protestanta, ny Vondronasan'ny Fifandraisana Protestanta ary ny Vondronasa Fitoriana ny Filazantsara Protestanta.
Ireto kosa ny vondron-tsampanasa: ny Vondron-tsampanasa momba ny Fanabeazana, ny Vondron-tsampanasa momba ny Fanasoavana Protestanta, ny Vondron-tsampanasa momba ny Fitaizam-panahy Protestanta, ny Vondron-tsampanasa momba ny Fanolokoloana Protestanta, ny Vondron-tsampanasa momba ny Famokarana.
Fifandraisana amin' ny fiangonana hafaModifier
Mifandray amin' ny fiangonana kristiana hafa eto Madagasikara amin' ny alalan' ny Fiombonan' ny Fiangonana Kristiana eto Madagasikara (FFKM) ny FFPM sady mifandray koa amin' ireo fiombonam-piangonana iraisam-pirenena toy ny Conseil Œcuménique des Eglises (anglisy: World Council of Churches) sy ny Fédération Luthérienne Mondiale (anglisy: Lutheran World Federation) sy ny Alliance Réformée Mondiale (anglisy: World Alliance of Reformed Churches) ary ny Conférence des Eglises de Toute l'Afrique (anglisy: All Africa Conference of Churches).
Boky sy tranonkala azo anovozan-kevitraModifier
Raminosoa Marcel (Mpandrindra), Inona moa ny FFPM ?, Antananarivo, 2003, 44p.
Fiangonana eto Madagasikara
↑ 1,0 et 1,1 Inona moa ny FFPM ?, p.33.
↑ Inona moa ny FFPM ?, p. 5.
↑ Inona moa ny FFPM ?, p. 28.
↑ Inona moa ny FFPM ?, pp.36-37.
↑ Inona moa ny FFPM ?, p.39.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiombonan%27_ny_Fiangonana_Protestanta_eto_Madagasikara&oldid=1036590"
Dernière modification le 25 Aogositra 2021, à 12:25
Voaova farany tamin'ny 25 Aogositra 2021 amin'ny 12:25 ity pejy ity.